बीबीसी मास्टर सेफ सन्तोष साहसँग कुरा गर्दै सुरु भयो 'च्या खानुभो ?'को सिजन टु [भिडियो]
बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स यूकेको फाइनलमा पुग्दैगर्दा सन्तोष साहलाई हिरो मान्नेहरू थुप्रै थिए । सिराहा कर्जन्हामा बस्दै आएकी उनकी आमाले त्यस बेला भनिछन्, 'तिमीहरूले पो मेरो छोरालाई अहिले हिरो मान्यौ । ऊ त मेरा लागि सधैँ हिरो थियो ।'
एसएलसीमा तीन–तीनवटा विषयमा चिप्लिएर, अनि आफ्नै जीवनको अभाव र गरिबीहरूबाट फुत्केर सन्तोषले संघर्षको बाटो समाए । हाम्रो आमजीवनमा अझै पनि सम्मान पाउन नसकेको कुक, अर्थात् भान्छेलाई आत्मसम्मानपूर्वक उनले अघि बढाए । अचेल उनी 'सन्तोष सेफ' भनेर बेलायतमा प्रसिद्ध छन् । औँलामा गन्न सकिने सेफमध्ये एक उनी नेवारी रक्सी अय्लालाई आफ्नो पुस्तकको नाम दिँदै छन् ।
हरेक क्षितिज टेकिसक्दा पनि हामीसँग टेक्नलाई अर्को क्षितिज बाँकी नै रहन्छ । जस्तो कि सन्तोष मास्टर सेफ यूकेबाट सर्वत्र चिनिइसके । अब उनी अर्को क्षितिज हेर्दै छन्, मिसिलिन स्टार । त्यसअघि उनी किताब लेखिसक्न चाहन्छन् । त्यसैको शोधखोजका लागि उनी आफ्नी आमा भेट्न, अनि देशभित्रको खानाका परिकार स्वाद अन्वेषण गर्न आइपुगेका छन् ।
च्या खानुभो ? को दोस्रो सिजन केही समयको अन्तरालपछि ल्याउने हाम्रो योजना थियो । तर, सन्तोषले यो समय रेखा घटाइदिए । त्यसैले त उनलाई हामीले ग्रीन टी सिजनको पहिलो एपिसोडमै डाक्यौँ, र सँगै च्या खायौँ ।
उनीसँग शिलापत्रका प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेतको यो संवाद:
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १४, २०७७, १९:०४:००